musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Mel Gibson Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemutambi mutambi uye mugadziri wemafirimu anozivikanwa kwazvo sa “Mel“. Yedu Mel Gibson Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweiyo Brave Moyo Movie Legend kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvazvo iyo mafirimu ayo basa segamba rekuita. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Mel Gibson's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Mel Gibson Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure
Mel Colmcille Gerard Gibson akaberekwa pazuva rechitatu raNdira 1956 kuPeekskill muNew York, USA.
Aive wechitanhatu pavana gumi nemumwe vakazvarwa naamai vake, Anne Patricia (muchengeti wemba) uye kuna baba vake, Hutton Gibson (a brakeman njanji).
Nezve midzi yake, Mel anonyanya kuve maIreland, aine mamwe maChirungu, maScot-Irish / maIrish eIreland neWales, madzitateguru
Wechidiki Mel akakurira pamwe nevakuru vake 5 vakoma paPeekskill kwaakapedza makore 12 mhuri yake isati yatamira kuAustralia.
Kutama kwavo kwakauya mazuva mashoma mushure mekunge baba vaMel vakunda a US $ 145,000 mhosva ine chekuita nebasa-yakanangana neNew York Central Railroad.
Paakagamuchira mari iyi, Hutton asina kugadzikana mune zvemari akaita sarudzo yezvehupfumi yekubva kuUS nemhuri yake kuAustralia panguva dzakakwirira dzehondo yeVietnam.
Ndichiri kuAustralia maGibons 'akagara kumusha kwambuya vaMel kuWest Pymble, Sydney. Vabereki vaMel mushure mezvo vakatambira kuwedzerwa kwevamwe vana vashanu paakaenderera mberi nedzidzo.
Mel Gibson Dzidzo:
Chinozivikanwa pakati pekufambira mberi kwaMel mune zvedzidzo yaive yake yekuAustralia chikoro chesekondari ku St. Leo's Catholic College, Wahroonga uye kuguma kwayo Asquith Boys High School muAsquith.
Zvinenge zvichifadza kuziva kuti Mel akanga asina ruzivo rwekuita mumitambo yemitambo yezvikoro zvepamusoro uyewo panguva yefundo yepamusoro paYunivhesiti yeNew South Wales muSydney.
Mel anga achishuvira kuve chef kana mutapi venhau apo hanzvadzi yake mukuru yaakazviona kuti aigona kuita zvakanaka muTheatre Arts.
Kusvikira izvozvi, akaendesa chikumbiro pachinzvimbo chake pa 'National Institute of Inoshamisa Art' (NIDA) muSydney.
Saka zvakatanga "rwendo rwemitambo" rwevadiki veIrish avo vakagamuchirwa kuti vadzidze pachikoro mushure mekuwedzera kuburikidza nekuongorora.
Yakanga iri pachikoro icho Mel akatamba anotungamira mabasa mukugadzirisa madrama echinyakare uye akaita yake ye-on-screen mufirimu ra1977, Zhizha Guta.
Mel Gibson Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Mel akapedza kudzidza kubva kuInstitute muna 1977 ndokubatana ne 'Southern Australian Theatre Company, achishanda semutambi wedariro. Makore gare gare muna 1979, mafirimu maviri aakange achishanda kuti aburitswe.
Ivo vanosanganisira rake basa semupwere anononoka mupfungwa mufirimu "Tim" pamwe nekutora chinzvimbo chekutungamira mune yekupedzisira-apocalyptic yekuita bhaisikopo - "Mad Max".
Kunyangwe ese mafirimu akabudirira, Aive Mad Max akaunza Mel nhanho padyo neMukurumbira uye akamutorera mubhadharo wake wekutanga muhombe wemadhora zviuru gumi nezvishanu.
Mel Gibson Bio - Simuka Mukurumbira:
Kuenderera mberi kweiyo firimu "Mad Max 2: The Road Warrior”Yakaburitswa 2 makore gare gare, yakamutorera Mel kagumi zvakapetwa mari yaaimbotambira uye zvinonyanya kumuita nyeredzi yepasi rese.
Mel akazopedzisira ave zita remhuri paakabata mu "Brave Moyo", bhaisikopo iro richiri kutenderera pasirese makumi maviri emakore mushure mekupfura.
Mushure mokuva zita remhuri, Mel Gibson akaenderera mberi kutungamirira iyo mafirimu “Kushuva kwaKristu” iyo yakawana anodonhedza $ 611.9 Million mubhokisi hofisi.
Parizvino, iri ndiro bhaisikopo rake-rinotambira zvakanyanya kusvika parinhasi iro rakawana mazita matatu eOscar. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ndiani Mukadzi waMel Gibson:
Kuseri kweiyo Legendary Movie Legend, kwave kuine vamwe vakadzi vanoyevedza. Mel Gibson ave akaroora kana tichinge takuunzira mashoko echokwadi nezvehukama hwake uye hwehukama hwehukama.
Chokutanga chaiva neukama hwake nemudzimai waimbova Robyn Moore (akaberekerwa 1950). Robyn aiva mukoti wemazino akaonana naMel mu1977 mushure mokunge apedzisa kupfura kwaMad Max. Dhoo dated kwemakore anoda kusvika matatu isati yaroora paC7th yaJune 1980.
Imba yavo yakagara kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe panguva iyo Robyn akamhan'arira kurambana muna 29. Zvikonzero zvekurambana kwanga kusiri kure nekushandisa zvisina kufanira hwaMel doro hwainge hwamuisa munhau dzemutemo.
Mutambi uyo akambobvuma kunwa kubvira aine zera 13 aive munguva yakapfuura aburitsa kuti:
“Kudhakwa chinhu chinofamba mumhuri yangu. Icho chinhu chiri padyo neni. Vanhu vanodzoka mairi, uye chishamiso. ”
Vakaroorana vakaroorana zviri pamutemo musi waDecember 23, 2011, naRobyn vachikotora hutori hweHollywood huri kudarika $ 400 mamiriyoni.
Mel Gibson Biography Chokwadi - Vana NaRobyn Moore:
Kusvika varambana, Mel naRobyn vaive nevana vanomwe pamwechete. Wokutanga wevana vaMel uye mugadziri weMakeup anozivikanwa saHannah Gibson. Iye akazvarwa munaNovember 1980 uye anofananidzirwa nemurume wake pazasi.
Izvozvi mapatya avo vanakomana vechiKristu uye Edward Gibson (akazvarwa muna June 2, 1982). MuKristu (unofanirwa kurudyi) ndiye mutambi anonyanya kushanda mubazi rekhamera pakagadzirirwa. Edward ndiye muvambi wekambani yefenicha inonzi Natural Edge.
Chinyanyozivikanwa nezvaWilliam "Will" Gibson akaberekerwa mu 1985 (akafananidzirwa kuruboshwe). Zvisinei, munun'una wake Louie Gibson (akaberekerwa 1988) ndiye mutungamiriri wefirimu uye munyori akaroorwa nemudzimai wechiito Annet Mahendru.
Milo Gibson (akazvarwa muna 1990) ndiye wechipiri kumwana wekupedzisira akaberekwa naMel naRobyn. nepo Thomas Gibson akazvarwa mu1990 (akafananidzirwa kurudyi) ndiye wekupedzisira pahama. Akapedza kudzidza kukoreji muna 2017.
Mel Gibson Oksana Grigorieva Nyaya:
Mel akatanga hukama neChiranist Pianist Oksana Grigorieva (akaberekwa February 1970) apo kupomerwa kwakaramba kuripo pamusoro pokurambana naRobyn.
Kunyange zvazvo Mel naOksana vakanga vasati varoora, vaine mwanasikana pamwe chete ainzi Lucia Gibson (akaberekwa XNUM October GNUMX).
Ivo zvakadaro vakapatsanura Muna 2010 apo Grigorieva akamhan'arira uye akawana ganho rekudzivirira kubva kuna Mel, achitsanangura kudzokororwa kwekutukwa nekurohwa.
Akapihwa dzimba dzinosanganisira, $ 750,000, mubatanidzwa wekuchengetwa pamwe chete neimba yekugara kusvikira mwanasikana wavo Lucia asvitsa makore gumi nemasere.
Mel ari panguva yepositi iyi muhukama neyaimbove vaulter yequestrian, Rosalind "Rosey" Ross. Akasangana naMel mu2014 panguva yekubvunzurudzwa kwaJob paIcon (kambani yaMel). Hazvina kutora nguva vasati vaonekwa vese vari vaviri pamwe sevakaroora pazororo revanhu.
Hukama hwavo hwapa kumwanakomana Lars Gerard Gibson akazvarwa musi wa 20th waNdira 2017.
Mel Gibson Hupenyu Hwemhuri:
Mel Gibson akaberekerwa mumhuri huru kwazvo. Tinokuudzai nezvemhuri yemhuri yake.
Nezvebaba vaMel Gibson: Baba vaMel Hutton Gibson vakazvarwa musi wa 26 Nyamavhuvhu 1918. Old Hutton vakashanda sevashandi vezvitima uye murwi weHondo Yenyika II.
Hutton anozivikanwa zvakanyanya nekuve mutsoropodzi weKereke yeKaturike yapashure pemusangano uye akanyora mabhuku matatu kusvika ipapo.
Zvakangodaro, Hutton ndibaba vane hanya vaifarira vana vavo pamoyo uye havafi vakarega kuvatsigira.
Chakazivikanwa pakati pavo kwaive kuenda kuAustralia nechinangwa chekudzivirira mwanakomana wake wedangwe kunyoreswa muHondo yeVietnam neuto reUS.
Pamusoro peMel Gibson amai: Amai vaMel Gibson Anne Patricia Gibson vakazvarwa mugore ra1918 muIreland. Kutsvaga kwaAnne mafuro manyoro kwakamutungamira kuenda kuUS kwaakasangana ndokuroora Hutton mu1944.
Akagara kwenguva yakareba zvakakwana kuti aone vana vake vachinyora zvakakosha zvehupenyu hupenyu asati afa muna 1990.
Pamusoro peMel Gibson Amai vokutanga: Kutevera kufa kwababa vaAnn Mel vakaroora Teddy Joyle Hicks (akazvarwa 1934) mu2002. Hukama hwakararama makore gumi nerimwe hwakanga husingawirirane naMel nehanzvadzi yake Maura.
Nekudaro, ivo vakwegura vakaroorana vakagadzirisa kurambana mu2012 vachitsanangura kusawirirana kusingawirirane.
Pamusoro peMel Gibson vanin'ina vake: Mel ane hanzvadzi dze5 nehanzvadzi shanu. Vanosanganisira hanzvadzi yake huru, Patricia Donohoe. Mudzimai uye amai vevana vatatu.
Chipiri ndeyeSheila O'Connor, hanzvadzi yakakura iyo yakamisa Mel mumugwagwa wekuvandudza basa mukuita nekuisa chimiro panzvimbo yake pa National Institute of Dramatic Arts.
Kune Mariya Estridge, akadzidza kuSyracuse University, mudzimai uye amai vevana vatatu.
Uyewo Kevin Gibson, hama iyo inofunga kuti yakwegura kupfuura Mel.
Vamwe ndiMaura Louise, hanzvadzi iyo inozivikanwa zvishoma nezvayo kunze kwekushandira pamwe naMel kupokana nemuchato wavo wechipiri wababa.
Kufambira mberi, Christopher naDhaniel Gibson vane mapatya hama dzakaberekerwa mu1957. Christopher akafananidzirwa kuruboshwe anozivikanwa kuti ave achirwisana nekudhakwa kunwa doro zvishoma zvingazivikanwa pamusoro paDaniel.
Kune Donal Gibson, munun'una wechidiki, mutambi uye muvepi anonzi akaberekwa pa 13th yaFebruary 1958.
Anne Gibson, hanzvadzi yechidiki kuna Mel uye akapedza chikoro cheAsquith Girls High School.
Uye pakupedzisira Andrew Gibson, hanzvadzi yakagamuchirwa yakatanga kuzivisa kuva gayini paaiva nemakore 22.
Mel Gibson Hupenyu hweMunhu:
Mel murume akasimba ane chisel maficha ane pamusoro pemakore ano kuve anozivikanwa nekuda kwerudzi rwake, zvebonde, uye zvekupokana neSemite.
Kunyangwe Mel achibvuma kukanganisa kwake, anotenda kuunganidza zviito zvake ibasa rakakura.
“Handina kururama mune zvematongerwo enyika, ichokwadi. Kurongeka kwezvematongerwo enyika kwandiri hunongova hugandanga hwepfungwa.
Ini ndinoona zvichityisa, uye handizotyisidzirwe mukuchinja pfungwa dzangu. Munhu wese haasi kuzokuda nguva dzose. ”
Padivi rakajeka, Mel ndiye Anoboora murume ane maziso ebhuruu, baba vane hanya uye shamwari ine rudo inodya zvakanaka, shanda zvakanaka. Padivi rakashata kwazvo, Mel dzimwe nguva anonzwa kushushikana kwechirume uye anobata pfungwa dzakaora moyo nezve hupenyu.
Mel Gibson Biography - Chokwadi Chakashinga Mumoyo Movie:
Waizviziva Here?… Imwe yefirimu yekuwedzera uyo anga akaneta kwazvo mushure memaawa ekuita akanganisa mumwe wevana vaMel Gibson semukomana wekutumwa. Akakumbira kuenda kunomutorera kapu yetii.
Nehurombo, Gibson aive mukati mekunzwa uye akanzwa iwo mazwi ekuraira. Zvinoshamisa kuti akagutsurira musoro ndokuzevezera kumwanakomana wake, “Endai kuwana!"
Waizviziva Here?… Mel Gibson netsaona akazvisungirira kwekanguva panguva yekufa kwake. Izvi zvakaita kuti makamera asviba, uye chiitiko ichocho chaifanira kutemwa nevashandi.
Waizviziva Here?… Zvimwe zvemuvhi zvaiwana madhora mazana matatu pavhiki uye yaigara ichishanda kwemaawa gumi nemana. Izvi zvekuwedzera zvakawanda zvacho zvaive zvisina basa zvakaramba zvichikanganwa kubvisa magirazi avo ezuva nemawachi. Izvi zvakaita kuti hondo ipfurwe kakawanda.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Mel Gibson Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!